Wonke umntu uyazi: umzimba womntu awukwazi ukusebenza ngokupheleleyo ngaphandle kwezixhobo eziphambili: iiprotheni, amafutha, i-carbohydrates, iivithamini kunye neemaminerali. Nangona kunjalo, kubalulekile nokuba yiyiphi imveliso enikezela ezi zinto kumzimba. Namela ingqalelo ukutya odla kuyo yonke imihla. Ngaba zikhona imifuno neentyatyambo ezaneleyo, izantyambo, imifino, ivenkile zasemanzini phakathi kwazo? Ukutya kwasekuseni, ikhofi nge sandwich - okanye i-yogurt, i-cereal, isiqhamo? I-Pasta ene-gravy - okanye isobho elitshisayo, isiqwenga se-fat fat inyama kunye nemifuno yokuhlwa kwasemini? Ingaba unayo ininzi yesidlo sakho ukuya kwiiyure ezingama-18 okanye ubuya ekhaya uvela emsebenzini "kanye kunye nabo bonke" ngepata yokufrywa ngeetatata eziqingqiweyo kunye neengqungquthela? Ngaba uvame ukuzivumela "ukugqithisa kwezilwanyana" njengamafutha, ukubhema, isonka, ukutya okuthosiweyo? Ukuba uphendula ewe kwimibuzo emalunga nokungondleki, yilungele ukutyelela kwangaphambili kwi-gastroenterologist. Isisu sethu ixesha elide sikwazi ukusebenza kwiimeko ezinzima, kodwa xa umonde wakhe uphela.
Uphi na ukukhulelwa komzimba?
Ngokuphulwa rhoqo kwemithetho yokutya okunempilo, unokuba neengxaki zokugonya. Okokuqala - into encinci yokunciphisa ngexesha okanye emva kokutya, uvakalelo lwesisu esiswini; ngoko-ukuphazamiseka kokugaya ukutya, ngokukhawuleza ukuqhubela isicupunu. Kunokwenzeka ukuba le mpawu ibonisa intestinal dysbiosis - imeko engathandekiyo eyenziwa ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo, enye yazo iiphoso ekudleni. Ingundoqo yinto yokuba kancane kancane i-intestinal microflora ithatha indawo yonyango, i-pathogenic. Kule meko, kuyimfuneko ukulungisa imvelaphi yamathumbu ngamancedo amalungiselelo eqela lama probiotics, njenge-linex, njl njl. Kwaye kungcono ukwenza oku kunye neempawu zokuqala zokungahambi kakuhle, ngaphandle kokulinda ii-microorganisms ezinama-pathogen ukuhlala emathumbu. Kule meko, iingxaki zempilo ezinzulu zinokwenzeka, ukuya kwehla ekukhuseleni, kuba malunga ne-80% yezinto ezijongene nokusebenza kakuhle kwe-immune system ziveliswa ngokuchanekileyo emathunjini!
Kubalulekile ekukhuseleni iingxaki ngokugaya, kunye nempilo ngokubanzi, yindlela olungisa ngayo ukutya: gazinga, ubilise, isonka, ubhaka okanye upheke ngebini okanye kwi-grill. Abantu abajonga impilo yabo, bayazi ukuba okuthosiweyo kuyingozi kumzimba. Kwinkqubo yokucima, oko kuthiwa amafutha azinzileyo aguqulwa abe ngamafutha atyhulwayo, enokubangela isongelo kwinkqubo ye-cardiovascular and can be a carcinogens. Kwinkqubo yokuloba, ininzi enkulu yamafutha iyancipha kwiimichiza zamakhomikhali, ezingakhokelela ekuphuhlisweni kweengxaki ze-neurological of nature, kwaye kwandisa ingozi yokuba nomhlaza. Ukongezelela, izinto ezinobungozi ze-aldehydes zinyanzelisekile, oko kukuthi, ngexesha lokucocwa likhuphuka emoyeni, zingene kumoya womntu. Ukuba ioli sele isetyenzisiwe, ayikwazi ukuphinda isetyenziswe, ngokuba ioli ephinda ishushu iqulethe i-aldehydes enkulu. Ewe, asiyi kuthetha ukuba xa isidli esidliweyo sidliwa yinto enobungozi obungenakucinganiswa nomzimba. Nangona kunjalo, ukuba uyakuthanda ukutya okuthosiweyo, kuyafaneleka ukuba ucinge indlela yokunciphisa ingozi eyenza umzimba. Indlela elula ukuyeka ukusebenzisa ioli. Kodwa ... ungayifaka njani inyama, intlanzi, imifuno ngaphandle kokubamba ukuphuma? Impendulo ilula: sebenzisa isidlo esifana ne-chain-cleaner, eyenzelwe ngokukhethekileyo ukwenza ukutya kwijusi layo, ngaphandle kokungeza ioli. Izidlo ziphekwe kwiivenkile ezinjalo, zivumele ukuba ulondoloze ubuninzi bezinto ezinobuncedo kunye nenzame yemvelo yemveliso. Ngenxa yezizathu ezifanayo, unokunciphisa inani lesityuwa kwinkqubo yokupheka okanye ungayisebenzisi. Zama ukupheka isidlo sakho ozithandayo kwisidlo esifanayo - uya kumangaliswa indlela ongaqhelekanga ukunambitheka kwenene yengulube okanye intlanzi ye-fish!
Ngokuqhelekileyo ukutya kwethu kuhamba kunye nokufumana iziyobisi. Isihlandlo seminikelo yokubingelela sinokuba ngumthendeleko wesidlo, intetho yezoshishino, intlanganiso enobungane, kunye nomnqweno wokuphumla emva komhla oxakekileyo. Asiyi kuthi, njengoMphathiswa wezeMpilo, uxwayise ngeengozi zotywala. Ngamanani amancinci, iziyobisi ezinxilisayo zinokuba luncedo kwimpilo. Ngoko, ukusela iglasi ebomvu iwayini elomileyo imihla ngemihla, uyanciphisa umgangatho we "cholesterol" embi egazini, ukhusela ukuphuhliswa kohlobo lwesifo sikashukela, ulungele izinga le-glucose, njl njl. Nangona kunjalo, ngelishwa, bambalwa abantu bancinci kwiklasi enye yewayini. Ukuba imiphumo yesantya yenkampani ayibonakali ngendlela engcono kwiimeko zempilo, kunengqiqo ukuphendulela ekuncedeni ukulungiswa okulindelekileyo kunye novavanyo olufana ne-Alka-Seltzer, ukwenzela ukuba inwele, inxano, ukungahambi kahle akuzange iphule izicwangciso zakho zosuku olutsha. *** Ukuqulunqa into ekuthethwe ngayo, masiqaphele: ubulumko obudala "Le ndoda into ayidlayo" ayizange ilahlekelwe yimpumelelo kwiintsuku zethu. Ukuba ukwandisa ngendlela ethile kwaye uthi "Indoda yinto ayidlayo, isiselo kunye nendlela akwenza ngayo," unokuphucula kakhulu impilo yakho-kunye nomgangatho wobomi ngokubanzi.
Luhlobo luni lokutya emva kokuzalwa komntwana kufuneka abe ngumama
Ukulimala kokutya okukhawulezayo
Izizathu zeengxaki zokuxilonga
Ukutya okunokubangela ukutshaya
I-anyanisi kunye nezixhobo zayo ezincedo kumzimba womntu
Iidlephe zokutya ezimnandi
Umhla wokuzalwa kuka-Olga Navrotskaya
Ungayihlamba njani imilenze ngomshini?
Indlela yokufumana i-yogurt yangempela
Isaladi kunye ne-caviar ebomvu
Ngaba ndinokugqoka ubunzima ngexesha lokukhulelwa?
Iingxaki ezi-3 zezilungelelaniso zesikolo kunye nezindlela zokuzisombulula
I-Biography yomdlali we-Ornella Muti
Indlela yokugqoka umlindi wesiko?
I-Amaranth - ukutya kwekamva